Iindaba -Ukhetha njani ngaphambili okanye ngasemva kulondolozo lwentetho yakho ekhokelwayo.
Ungayikhetha njani ngaphambili okanye ngasemva isondlo somboniso wakho okhokelwayo.
Iindlela zolondolozo zomboniso okhokelwayo zahlulahlulwe kakhulu kulondolozo lwangaphambili kunye nolondolozo lwasemva.
Ulondolozo lwasemva olusetyenziselwa izikrini ze-LED zokwakha iindonga zangaphandle, kufuneka ziyilelwe ngasemva ngasemva ukuze umntu enze ulondolozo kunye nokulungisa ngasemva komzimba wesikrini.
Qinisekisa ubungqina bamanzi ngokwaneleyo kwindawo engaphandle, umboniso ogcinwe ngasemva nawo ufuna iphrofayili ye-aluminium ejikeleze iphakheji ukuqinisekisa ukuba akukho manzi atshona kumboniso okhokelwayo, kwinqanaba elifanele ukuya kuthi ga kwi-IP65.
Iimfuno zobugcisa zizonke ziphezulu, ukufakwa kunye nokususwa zinzima, kwaye zichitha ixesha.
Kwakhona, ukubonisa ngaphandle kwangaphandle, i-YWTLED iphuhlise iindlela ezimbini zokubonisa umboniso wangaphandle wokugcina.
Esinye isisombululo sokugcina ngaphambili kukujikeleza kwescular nge-pixel p3.91, p4.81, p5.33, p6.67, p8, p10, p16, inqanaba lobungqina bangaphandle esele lifana ne-IP65.
Olwesibini umphambili wokugcina sisisombululo esingaphandle esivulekileyo sekhabhathi.
Ikhabethe yangaphambili evulekileyo yentsimbi kunye nentonga ye-hydraulic edityanisiweyo kuyo yonke into ekhokelwayo.
Ngolondolozo lwangaphambili, isikrini esikhokelwayo sinokuyilwa sibemncinci kwaye sikhanyise, sidityaniswe nendalo esingqongileyo, sifezekise imbonakalo ehambelana nayo.
Kwindawo ethile yangaphakathi ingakumbi eneendawo ezixineneyo, okanye ufakelo olubekwe eludongeni, ngokucacileyo, ayisiyonto ilungileyo yokugcina ngasemva.
Kunye neTekhnoloji yePixel yePitch Pitch yeTekhnoloji ye-LED ephuculweyo, ulondolozo lwangaphakathi lwe-LED ukubonisa ngokuthe ngcembe kulawula intengiso.
Yakhelwe ngombane ukulungisa imodyuli kwikhabhinethi okanye kubume bentsimbi. Vula yonke ikhabethe okanye iimodyuli ezivela kwicala elingaphambili, Xa uqhaqha, i-Sucker ngqo ichukumise umphezulu womgangatho wolondolozo lwangaphambili,
Xa kuthelekiswa nolondolozo lwasemva, uncedo lwesikrini se-LED yolondolozo ikakhulu kukugcina indawo kunye nenkxaso yenkxaso, ukwandisa ukusetyenziswa kwendawo kunye nokunciphisa ubunzima bomsebenzi emva kwentengiso.
Indlela yolondolozo lwangaphambili ayifuni sihlalo, ixhasa ulondolozo lwangaphambili oluzimeleyo, kwaye igcina indawo kwiscreen umva.
Akukho sidingo sokudibanisa intambo, ixhasa umsebenzi wolondolozo olukhawulezileyo, uthelekisa nolondolozo lwangasemva, ekufuneka isuse izikhonkwane ezininzi kuqala ukukhupha imodyuli yangaphambili-yolondolozo ilula kwaye ilula ngakumbi. Nangona kunjalo, ngenxa yegumbi elinomda wendawo, ulwakhiwo luneemfuno eziphezulu ekusasazeni ubushushu kwikhabhinethi, ngapha koko isikrini kulula ukuba siphumelele.
Kwelinye icala, ulondolozo lwasemva lunenzuzo yalo.
Amaxabiso asezantsi, ukusasaza okuhle kobushushu, okulungele ngakumbi uphahla, ikholamu kunye nolunye umsitho, kwaye kuvavanyo oluphezulu kunye nokusebenza ngokukuko.
Ngenxa yesicelo esahlukileyo, unokukhetha ezi ndlela zimbini zolondolozo ngokweemfuno zakho.